Darpan Nepal – यस्तो विशेषता छ, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालमा प्रयोग गर्ने ‘बुलेट प्रुफ’ गाडी
यस्तो विशेषता छ, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालमा प्रयोग गर्ने ‘बुलेट प्रुफ’ गाडी
May 11, 2018Admin12News0Like
काठमाडौं, २८ बैशाख । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लागि प्रयोग हुने दुइटा ‘बुलेट प्रुफ’ गाडी नेपालमा आइसकेको छ । भारतीय वायु सेनाको विमान मार्फत मंगलबार बिहान गाडीसहित चालक आएका हुन् । प्रधनमन्त्री मोदी बैशाख २८ र २९ गते नेपाल भ्रमणमा रहनेछन् ।
आगामी शुक्रबार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पटनाको बाटो हुँदै जनकपुर आउँदैछन् । प्रधानमन्त्री मोदीको सुरक्षाको लागि नेपाल आउँदा भारतबाट नै ‘बुलेट प्रुफ’ गाडी ल्याउने गरेका छन् । ४१ सुरक्षाकर्मीसहित आएको भारतीय वायु सेनाको विमानले गाडीलाई काठमाडौंमा छोडेर फर्किएको छ ।
यस्तो छ मोदीले प्रयोग गर्ने बुलेट प्रुफ गाडी
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विशेषगरी दुईवटा ब्रान्डका गाडी प्रयोग गर्दछन् । प्रधानमन्त्री भएलगत्यै मोदीलाई तयार गरिएको बिएमडव्लु–७ सिरिज ७६० आईको गाडी बढी मात्रमा प्रयोग गर्दछन् । जर्मनी गाडी उत्पादक कम्पनी बिएमडव्लुले सेक्युरिटी भर्सन नाम दिएको उक्त गाडीमा सुरक्षाका लागि सवै प्रकारका सेवा सुविधा सहित मोदीका लागि गाडी तयार गरेको थियो ।
विश्वका ७ औ शक्तिशाली नेताको रुपमा दर्ज भएका मोदीको सुरक्षाका लागि भारतीय सुरक्षा निकायले विशेष चासो दिदैं आएको छ । नेपालमा अघिल्लो पटक औपचारिक भ्रमणमा आउँदा पनि मोदीले सोही गाडी नेपाल ल्याएका थिए ।
गुजरातको मुख्यमन्त्री हुदाँ भने मोदीले महिन्द्राको स्करपियो गाडी चढ्ने गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री भएपछि भने बिएमडब्लुको उक्त सेक्युरिटी भर्सनका दुई गाडी बढी मात्रमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।उक्त गाडी प्रधानमन्त्री को सुरक्षा विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) को हातमा रहेको छ ।
किन बीएमडब्ल्यू ७– ७६० आई सुरक्षा संस्करणनै ?
प्रधानमन्त्री मोदीको आधिकारिक ट्राभस्पोर्टरको रूपमा छनोट गरिएको छ । उक्त गाडीको विश्वमा एकदमै कम रहेको छ । जसका कारण अपराधीहरुले योजना बनाउन कठिन रहेको छ । भने अर्कोे त्यसको उचाई तथा अन्य हिसावले पनि सुरक्षित बनाएको छ । कम उचाइ पनि अर्थ जमिन केन्द्रको नजिक छ। यो सजिलो घुमाउरो, द्रुत गतिमातत्कालै मोड्न सकिन्छ ।
उक्त सुरक्षा संस्करण ५–९–७२ सीसी भि १२ ईन्जिनियरिङ द्वारा प्रदान गरिएको ५४४ बीएचपी ५२५० आरएमपी र ७५० एनएम टोक ्र१५००–५००० आरएमपीएल इन्जिन रहेको छ । भने ६ स्पिड गेयर गाडीमा राखिएको छ ।
स्वचालित ट्राफिक टेलिभिजन रहेको उक्त गाडीमा ६.१ सेकेन्डमा प्रतिघन्टा १ सय किलोमिटर दौडन सुरु गर्न सक्दछ भने बढीमा प्रतिघन्टा २ सय ५० किलोमिटर दौडन सक्ने क्षमता गाडीम रहेको छ ।
गाडीले प्रतिलिटर पेट्रोलमा ४.५ किलोमिटर देखि ७.४६ किलोमिटर सम्म माइलेज दिने गर्दछ ।
सुरक्षा कस्तो छ ?
एके४७, एमए४ र इन्सासको आक्रमणबाट सजिलै बचाउँदछ
रकेट लन्चरबाट सुरक्षा
इन्धन ट्यांकीको विस्फोटबाट सुरक्षा
ग्यास बम तथा अन्यबाट सुरक्षा
जबकि बीएमडब्ल्यू ब्रान्ड आफैलाई १०० वर्ष पुरानो छ र एक विश्वसनीय नाम प्रदान गर्दछ । यो ब्रान्ड र भारतीय सरकार बीचको लामो सम्बन्धको कारण हो कि बीएमडब्ल्यू एक राज्य ट्राभस्पटरको रूपमा प्रयोग गरिएको छ । बीएमडब्ल्यू ८ सीरीज पहिला भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीले समेत प्रयोग गरेका थिए ।
मोदीको नयाँ गाडी रेन्जरोवर
मोदीले केही समय अगाडी मात्रै बुलेट प्रुफ रेन्ज रोवर स्पोर्ट गाडी लिएका छन् । उक्त गाडी भारतको ७१ औ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा बेलायती गाडी उत्पादक कम्पनी रेन्जरोवरले उक्त गाडी उपहार स्वरुप दिएको हो
Previous Postनेपाल बिना भारत अधुरो, भारतका काम पनि अधुरो: मोदी Next Post‘बल्छी ध्रुवे’ले गरे हिरोइन जस्ती राम्री बिहे